Gboard dia manolotra endrika iray izay manome sosokevitra emojis sy GIF | Androidsis
Manomboka manome emojis sy GIF i Gboard
Gboard no fitendry Google ho an'ny Android, izay angamba no be mpampiasa indrindra, ary izany dia manome antsika fiasa mahaliana maro. Ho fanampin'izay dia kitendry iray izay havaozina tsy tapaka. Fandraisana andraikitra vaovao no manatona azy, toy ny iray izay ho ofisialy ato ho ato, dia ny soso-kevitra ny fampiasana emoji sy GIF avy amin'ny fitendry.
Izy io dia fiasa iray nandrasan'ny mpampiasa Gboard hatry ny ela, saingy izao dia ofisialy. Ny fampiasana emojis sy GIF dia tena mahazatraNoho izany, arakaraka ny soratan'ny mpampiasa, no hatolotra ireo sosokevitra hampiasa GIF na emojis sasany. Efa vita ny fitsapana amin'ity asa ity.
Fomba iray ihany koa io omeo toerana misimisy kokoa ireo emoji sy GIF ao amin'ny Gboard. Tsy zavatra hafahafa izany, fa hitantsika ny fomba ampifanarahan'ny fitendry amin'ny fampiasana ireo mpampiasa ireto karazana sary masina ireto, izay fahita amin'ny resaka ankehitriny. Azo antoka fa tian'ireo mpampiasa fitendry Android maro izy ity.
Mba hahomby kokoa amin'ny asany, ampidirina koa ny mpilaza mialoha. Inona no hanampy antsika rehefa tsy maintsy misafidy emoji na GIF voafaritra izay halefanay amin'ny olona iray hafa ao anaty chat amin'ny rindranasa an-telefaona isika.
Ity fampiasa ity dia efa sedraina amin'ny fampiharana. Nampidirina tamin'ny fomba ofisialy tamin'i Gboard tamin'ny beta 8.8.. Na dia vitsy aza ireo mpampiasa no mahazo miditra amin'izany, dia hiandry kely kokoa isika mba hankafizan'ny mpampiasa fitendry Android rehetra azy.
Tsy misy isalasalana, fiovana izay ho hitan'ny maro fa miaboKa ho hitantsika raha manararaotra an'ity endri-javatra ity ny mpampiasa Android rehefa ampidirina amin'ny fomba ofisialy amin'ny Gboard vetivety izy ity. Ahoana ny hevitrao momba ny fisongadinana emoji sy GIF lehibe kokoa amin'ny fitendry?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Manomboka manome emojis sy GIF i Gboard
Article Chafa dia hoy izy:
Andro inona ity? Iza no mahalala. -_-
Valin'ny lahatsoratra Chafa
Ny Redmi 8 sy 8A dia manomboka mahazo ny MIUI 11 manerantany OTA